သင်ဟာ ဘယ်သူနဲ့ ဖူးစာဆုံမှာလဲ | Buzzy
သင်ဟာ ဘယ်သူနဲ့ ဖူးစာဆုံမှာလဲ
သင့်အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းနဲ့လား ၊ အိမ်နီးချင်းနဲ့လား ၊ သူငယ်ချင်းရဲ. မောင်နှမတွေနဲ့လား ၊ လက်ရှိချစ်နေသူနဲ့လား ၊ သင် ကျောင်းမှာစုံတွေ့ခဲတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့လား ၊ သင် စိတ်ထဲက ကျိတ်ကြိုက်နေသူလား ၊အင်တာနက်ဖူးစာလား ၊ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူ/သူမ ဟာ သင်နဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ပြီးသားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သင့်ဖူးစာဖက်ဟာ သင်နဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် အတွင်းသိ အစင်းသိ ဖြစ်ပြီးကာမှ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြမှာပါ ။ သင်တို့ကြားမှာ ဘာမှ လျှို.ဝှက်ချက်မရှိပါဘူး နားလည်မှုတွေနဲ့ပေါ့ ၊ သင်ကံကောင်းလွန်းပါတယ်။
You got: your neighbor
သင်အိမ်အနီးအနားမှာပဲ သင့်ဖူးစာဖက်က ရှိနေပါတယ် ၊ မျက်လုံးဖွင့်ထားပါ နားစွင့်ထားပါ ၊ အိမ်တံခါးခေါက်ပြီး မိတ်ဆက်ဖို့ လက်မနှေးပါနဲ့
You got: your best friends brother or sister
သင်သူငယ်ချင်းရဲ. မောင်နှမနဲ့ သင်က ဖူးစာစုံမှာပဲ ၊ ကျိတ်ခိုက်နေရင်လည်း သင့်သူငယ်ချင်းကို ယောက်ဖ ဒါမှမဟုတ် ယောင်းမ ခေါ်ဖို့ လက်မတွန့်ပါနဲ့ :)
You got: your current love
လက်၇ှိ ချစ်သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ရမှာပါ ၊ စိတ်မလှုပ်ရှားပါနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ ၊ သင့်ရဲ.ဖူးစာရှင်ဟာ သူမှသူ အစစ်ပါ။
You got: your someone you met in collage/school
သင်ကျောင်းတုန်းက တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ဖူးစာစုံရမှာပါ ၊ ကျောင်းနေဖက်တွေဆိုတော့ သင်တို့ဟာ ပြောမနာ ဆိုမနာနဲ့ ပျော်စရာ ကောင်းမှာပါ
သင်တစ်ဖက်သတ် ကျိတ်ခိုက်နေတဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာဆုံမှာပါ ၊ သူမသိသေးလည်း စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ တစ်ချိန်ချိန်တော့ သူက သင့်ကို ပြန်ပြီး စိတ်ဝင်စားလာမှာပါ ၊ ကြိုးစားသင့်တာလည်း ကြိုးစားပေါ့
You got: Internet Love
သင်ဟာ သင့်ဖူးစာဖက်နဲ့ အင်တာနက်ကနေ ဆုံတွေ့ရမှာပါ ၊ ခေတ်သစ်အချစ်မျိုးပေါ့....
You got: no one
တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး ၊ လက်၇ှိရှိတာတွေဟာလည်း ရေရှည်မှာ မမြဲနိုင်ပါဘူး